तेस्रो बातावरण साहित्य गोष्टि लन्डनमा हुने - Brizikhabar
कतारमा प्रथम शहीद क्या लखन थापा मगरको १४२औ स्मृति दिवस मनाए
राजमुपा को भेटघाट तथा अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न
१सय ४२औं लखन स्मृति दिवसमा मगरहरुलाई राजनीतिक निर्णायक लडाईं लडन आग्रह : पूर्व-मन्त्री एम एस थापामगर
फागुन २ गते ईतिहास बिद, मालबरसिंह थापा मगर, मगरात प्रदेश बुटवल आउने
नेकपा (क्रान्तिकारी माअाेवादी) निकट क्रान्तिकारी युवा लिगकाे रेड मार्चपास
मनोरञ्जन – कला
तेस्रो बातावरण साहित्य गोष्टि लन्डनमा हुने
२४ बैशाख २०७५, सोमबार १७:१५ May 7, 2018 Brizi Khabar	0 Comments
बिजय हितान, लण्डन ।
आइतवार, ३ जुन २०१८ कादिन तेस्रो बातावरण साहित्य गोस्ठी लन्डनमा हुने भएकोछ । विश्व बातावरण दिवसलाई पारेर आयोजना गर्न लागिएको उक्त साहित्य गोष्टिका प्रमुख अतिथी बेलायतकालागि नेपालीराजदुत तथा बरिष्ट साहित्यकार दुर्गाबहादुर सुबेदी रहनुहुनेछ ।
त्यसैदिन इकोकबिताहरुको सँगालो स्वछन्द सुसेलिहरु पनि बिमोचन गरिने संयोजक बिजय हितानले बताउनुभयो । उक्त सङ्रह भित्र बेलायत र नेपालमारहेका १०४ कबिहरुको पर्याबरणीय कबिताहरु रहेकाछन । गतदुईबर्ष लन्डनमा आयोजनागरिएका बातावरण गोष्टिमा बाचितकबिताहरु साथै २०१७ मा नेपालमा आयोजित अर्थआवरबातावरण कबिता प्रतियोगितामा सहभागि कबिताहरु समाबेश गरेर यो पुस्तक प्रकाशन गरिएकोछ ।
यसकार्यक्रमलाई बिगतमा झै बेलायतमा स्थापित बाह्र नेपाली साहित्य सङ्गठनहरुको सहयोगरहने संयोजक बिजय हितानले बताउनुभयो । साहित्यमार्फत बिग्रंदो बातावरणलाइ जोगाउन जनचेतना दिनु यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देस्य हो । प्रतेकबर्ष बातावरण दिवसको एउटा नाराहुन्छ । यसबर्षकोनारा सड्दैन सड्नेप्लास्टिक प्रदुसणसँग अब हामी लड्नेु भनी विश्वबातावरणदिवस आयोजक राष्ट्रभारतले घोषणागरेकोछ । यसबर्षको साहित्य गोष्टिमा भाग लिन आउने स्रष्ठा हरुलाई सकेसम्म यसैनारामा आधारित आ- (आफ्नो श्रृजना लिएर आइदिनहुन आयोजक हार्दिक आव्हानगर्दछ।
← नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पुर्व गैडाकोटमा सवारी साधन दुर्घटना
बेलायतमा खुल्ला सास्कृतिक कार्यक्रम हुने, साथमा नेपालका राष्ट्रिय कलाकारका बेजोड प्रस्तुती →
प्रदेश अधिवेशनको तयारी पुरा
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार १६:०२ Brizi Khabar 0
बड्का अत्वारको शुभकामना अदानप्रदान
३० भाद्र २०७५, शनिबार ०३:२९ Brizi Khabar 0
मतपत्र धमाधम छापिदै, ६१ जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम सकियो ।
२ बैशाख २०७४, शनिबार ०१:५४ Brizi Khabar 0
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०३:४० Brizi Khabar 0
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १८:२२ Brizi Khabar 0
मुख्य खबर मोफसल समाचार
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १७:०५ Brizi Khabar 0
बृजी मिडिया प्रा. लि. को लागि अध्यक्ष
आर बि अस्लामी
Copyright © 2019 Brizikhabar. All rights reserved.